आजका जमनामा प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य जस्तै भएको छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता आजका जमनामा प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य जस्तै भएको छ
on: १७ माघ २०७५, बिहीबार १४:३७ अन्तरवार्ता
आजका जमनामा प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य जस्तै भएको छ
नवराज कुँवर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, क्यान महासंघ
मेला गतवर्षको खासै फरक भएन भन्ने गुनासो अवलोकनकर्ताले गरेका छन् । प्रविधिको मेला भएपछि यससम्बन्धी जुन सामान हुनुपर्ने हो, त्यो नराखिएको पनि देखियो । किन यस्तो भएको हो ?
हाम्रो प्रमुख उद्देश्य नै प्रविधिका सामग्रीको प्रदर्शनी हो । मेला विगतको भन्दा निकै फरक छ । यो त मानिसको बुझाइमा पनि भर पर्ने कुरा हो । मेलामा नवीनतम प्रविधि र यसम्बन्धी सामान राखिएका छन् । डिजिटल ट्रान्मिशनदेखि प्रविधिका हरेक समानका विशेषता र कार्यप्रणालीमा नयाँपन हुन्छ । ल्यापटप अथवा सुरक्षाका विभिन्न सामान हेर्दा उस्तै लाग्छ, तर भित्री विशेषता र डिजाइनमा धेरै फरक हुन्छ । जस्तै– अहिले ८ जेनेरेशनको ल्यापटप बजारमा आएको छ । तर हेर्दा उस्तै लाग्छ । यसका राम्ररी हेरेमा वा प्रयोग गर्न थालेपछि मात्र यसका विशेषता थाहा हुन्छ । प्रविधिका अपग्रेड भर्शन आइरहेका हुन्छन् ।
मेलामा हामीले रोबोट, स्मार्ट सिटी तथा भिलेजको परिकल्पना, स्मार्ट स्कूलको योजनाको उदाहरण पनि राखेका छौं । कम्पनीका आ–आफ्नै प्रडक्ट छन् । केही कम्पनीले नयाँ प्रविधि पनि सार्वजनिक गरेका छन् । समग्रमा मेला प्रविधिमय नै बनेको देखिन्छ ।
देशमा सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि क्यान महासंघको सोच कस्तो छ ?
देशमा सूचना र प्रविधिको विकास विना समृद्धि सम्भव छैन । यसैका लागि हामीले आफ्नो कार्यक्रम अनुसार देशका विभिन्न ठाउँमा यस्ता मेला आयोजना गर्दै आएका छौं । तर यसमा हाम्रो मात्र प्रयासले सम्भव हुँदैन । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा प्राविधिक शिक्षा आवश्यक छ । केही ठाउँमा प्राविधिक शिक्षालय छन्, तर प्रभावकारी हुन सकेको पाइँदैन । त्यसैले सरकार र निजी व्यवसायीको समन्वयमा सूचना प्रविधि र प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने हाम्रो सोच छ ।
तपाईंहरूले प्रदेशस्तरीय क्यान इन्फोटेक मेला पनि गर्नुभयो । यसको मुख्य उद्देश्य के हो ?
जिल्लास्तरमा हामीले पहिला पनि मेला गरेका थियौं । तर प्रदेश स्तरीय भने पहिलो नै हो । अहिले प्रदेश १ र २ मा सकियो, प्रदेश ३ मा चल्ने क्रममै छ । अबको केही समयभित्र अन्य प्रदेशमा पनि क्यान इन्फोटेक आयोजना हुनेछ । प्रदेशस्तरीय क्यान इन्फोटेकको मुख्य उद्देश्य सूचना प्रविधि र यससम्बन्धी जानकारी बढीभन्दा सबै क्षेत्र र मानिससम्म पुर्‍याउनु हो । यसअघि यस्ता प्रदर्शनी केन्द्र र शहरी क्षेत्रमा मात्र हुने गरेका थिए । दूरदराज र ग्रामीण क्षेत्रका मानिस समेत प्रविधिका पछिल्ला विकासबारे अवगत र यसबाट लाभान्वित होऊन् भन्ने सोचले मेलालाई प्रदेशस्तरमा लगेका हौं ।
सूचना प्रविधि र प्राविधिक शिक्षा सबैको चासो तथा आवश्यकता बन्दै गएको छ । तर पनि विकास भने अपेक्षित गतिमा हुन सकेको छैन । यसको विकास र विस्तारका लागि के गर्नुपर्ला ?
हो, आजका जमनामा प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य जस्तै भएको छ । यसको प्रयोगले मानिसका हरेक क्रियाकलाप सहज र छिटो सम्पन्न गर्न प्रविधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विश्वभर प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ नयाँ विकास भइरहेका छन् । नेपालले पनि यसबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा नेपालीले प्रविधिको प्रयोग गर्न नसकेको अवस्था पनि छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्त हुन यससम्बन्धी जानकारी पहिलो आवश्यकता हो । त्यसैगरी देशमा प्राविधिक शिक्षाको पनि अभाव छ । यसको विकास र विस्तारका लागि सरकार र निजीक्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा पहल गर्न क्यान महासंघ सधैं तयार छ । महासंघले आफ्नै प्रयासमा पनि यससम्बन्धी विभिन्न काम गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा यसलाई थप विस्तार गरिनेछ ।